The Divine Move(2014) | MM Movie Store
မိုးသညျးထနျစှာ ရှာသှနျးနတေဲ့ညတဈည….မိုးခြိနျးသံတှကေိုဥပက်ေခာပွုပွီး အခနျးတဈခုအတှငျးမှာ လူ(၂)ယောကျဂိုကစားနကွေတယျ…လောငျးကစားလောကဟာ တဈကှကျကွိုမွငျသူ နှာတဈဖြားသာစမွဲမို့ ဘယျသူမှမသိအောငျ နောကျခံကစားပေးတဲ့သူလညျး ကိုယျစီရှိကွတယျ….
အင်ျကြီအနကျနဲ့လူကို နောကျခံကစားပေးတဲ့သူကတော့ သူ့ရဲ့ညီအရငျးဖွဈတဲ့ ထုတျဆုတျပါပဲ…သို့ပမေယျ့ သူတို့ညီအကို(၂)ယောကျကံမကောငျးခဲ့ဘူး…သူတို့ နောကျခံကစားပေးတာကို တဈဖကျအဖှဲ့က သိသှားလို့ ညီအကို(၂)ယောကျလုံးအဖမျးခံလိုကျရတယျ…
ညီအကို(၂)ယောကျလုံး အားရအောငျနှိပျစကျသှားတဲ့အပွငျ အကိုဖွဈသူကို လညျပငျးကိုလှီးသတျခံလိုကျရတယျ…ထယျဆုတျအတှကျ မကျြစိရှတှေ့ငျပငျ အကိုဖွဈသူသတျခံလိုကျရတဲ့အပွငျ မိမိကိုယျတိုငျမှာလညျး လူသတျသမားအဖှဲ့၏ ထောငျခြောကျဆငျမှုကွောငျ့အကိုဖွဈသူအားသတျမှုနဲ့ထောငျကသြှားပါတော့တယျ…
ဒီနောကျပိုငျးတော့ နာကဉျြးမှုတှပွေညျ့နှကျနတေဲ့ ထယျဆုတျအတှကျ ကြားနာတဈကောငျအသှငျသို့ပွောငျးသှားပါတော့တယျ…ဒီကားက ၂၀၁၄ခုနှဈမှာထှကျရှိပွီးတော့ ထယျဆုတျအဖွဈ Woo-sung Jung ကသရုပျဆောငျထားပါတယျ…
Cold eyes နဲ့ Steel Rain တို့ကိုကွညျ့ဖူးရငျ သူ့ကိုရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမှာပါ…အရပျ ၆ပေ ၁လကျမ ၊မကျြလုံးပေါကျမှေးကဉျြးကဉျြးနဲ့ ဒီမငျးသားကွီးဟာCold eyes ထဲမှာဆို ဘောပငျနဲ့ ဇှတျခနဲ ဇှတျခနဲ ထိုးသတျတာကို ကြှနျတျောတို့သဘောကခြဲ့ကွတယျ..ပွောရရငျ ဒီကားကတောငျပိုတောငျကွမျးမယျထငျတယျ…
ဓားတိုတှနေဲ့ စှတျခနဲ လညျပငျးကိုဖွတျလှီးတာတှမေကျြနှာတှမေတှနျ့ပဲ ဗိုကျတှကေို ဓားနဲ့ဇှတျခနဲထိုးတာတှေ တကယျ့ အမိုကျစားအကျရှငျခနျးတှနေဲ့…..ဇာတျလမျး ဇာတျအိမျလညျးကောငျးသလိုအကျရှငျခနျးတှထေိုးသတျခနျးတှမှောဆိုလညျး ကွညျ့ရငျးအူတှပေါယားလာသလိုလိုဖွဈမိလိမျ့မယျ…
ကိုငျးညှနျးတာလညျး မြားပွီဆိုတော့ ထောငျထဲမှာ သူဘယျလိုကွိုးစားပွီး အကိုဖွဈသူကိုသတျသူ့ဘဝကိုပါစုတျပွတျသှားအောငျလုပျတဲ့သူတှကေို ဘယျလိုလကျစားခမြေလဲဆိုတာကိုတော့ခံစားကွညျ့လိုကျပါဦးဗြို့….
မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းနေတဲ့ညတစ်ည….မိုးချိန်းသံတွေကိုဥပေက္ခာပြုပြီး အခန်းတစ်ခုအတွင်းမှာ လူ(၂)ယောက်ဂိုကစားနေကြတယ်…လောင်းကစားလောကဟာ တစ်ကွက်ကြိုမြင်သူ နှာတစ်ဖျားသာစမြဲမို့ ဘယ်သူမှမသိအောင် နောက်ခံကစားပေးတဲ့သူလည်း ကိုယ်စီရှိကြတယ်….
အင်္ကျီအနက်နဲ့လူကို နောက်ခံကစားပေးတဲ့သူကတော့ သူ့ရဲ့ညီအရင်းဖြစ်တဲ့ ထုတ်ဆုတ်ပါပဲ…သို့ပေမယ့် သူတို့ညီအကို(၂)ယောက်ကံမကောင်းခဲ့ဘူး…သူတို့ နောက်ခံကစားပေးတာကို တစ်ဖက်အဖွဲ့က သိသွားလို့ ညီအကို(၂)ယောက်လုံးအဖမ်းခံလိုက်ရတယ်…
ညီအကို(၂)ယောက်လုံး အားရအောင်နှိပ်စက်သွားတဲ့အပြင် အကိုဖြစ်သူကို လည်ပင်းကိုလှီးသတ်ခံလိုက်ရတယ်…ထယ်ဆုတ်အတွက် မျက်စိရှေ့တွင်ပင် အကိုဖြစ်သူသတ်ခံလိုက်ရတဲ့အပြင် မိမိကိုယ်တိုင်မှာလည်း လူသတ်သမားအဖွဲ့၏ ထောင်ချောက်ဆင်မှုကြောင့်အကိုဖြစ်သူအားသတ်မှုနဲ့ထောင်ကျသွားပါတော့တယ်…
ဒီနောက်ပိုင်းတော့ နာကျဉ်းမှုတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ ထယ်ဆုတ်အတွက် ကျားနာတစ်ကောင်အသွင်သို့ပြောင်းသွားပါတော့တယ်…ဒီကားက ၂၀၁၄ခုနှစ်မှာထွက်ရှိပြီးတော့ ထယ်ဆုတ်အဖြစ် Woo-sung Jung ကသရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်…
Cold eyes နဲ့ Steel Rain တို့ကိုကြည့်ဖူးရင် သူ့ကိုရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ…အရပ် ၆ပေ ၁လက်မ ၊မျက်လုံးပေါက်မှေးကျဉ်းကျဉ်းနဲ့ ဒီမင်းသားကြီးဟာCold eyes ထဲမှာဆို ဘောပင်နဲ့ ဇွတ်ခနဲ ဇွတ်ခနဲ ထိုးသတ်တာကို ကျွန်တော်တို့သဘောကျခဲ့ကြတယ်..ပြောရရင် ဒီကားကတောင်ပိုတောင်ကြမ်းမယ်ထင်တယ်…
ဓားတိုတွေနဲ့ စွတ်ခနဲ လည်ပင်းကိုဖြတ်လှီးတာတွေမျက်နှာတွေမတွန့်ပဲ ဗိုက်တွေကို ဓားနဲ့ဇွတ်ခနဲထိုးတာတွေ တကယ့် အမိုက်စားအက်ရှင်ခန်းတွေနဲ့…..ဇာတ်လမ်း ဇာတ်အိမ်လည်းကောင်းသလိုအက်ရှင်ခန်းတွေထိုးသတ်ခန်းတွေမှာဆိုလည်း ကြည့်ရင်းအူတွေပါယားလာသလိုလိုဖြစ်မိလိမ့်မယ်…
ကိုင်းညွှန်းတာလည်း များပြီဆိုတော့ ထောင်ထဲမှာ သူဘယ်လိုကြိုးစားပြီး အကိုဖြစ်သူကိုသတ်သူ့ဘဝကိုပါစုတ်ပြတ်သွားအောင်လုပ်တဲ့သူတွေကို ဘယ်လိုလက်စားချေမလဲဆိုတာကိုတော့ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦးဗျို့….